Okwu Mmezi Okwu. Okwu Iweghachite Software. Naghachi DOC & DOCX faịlụ.
Gịnị mere DataNumen Word Repair?
Iweghachite bụ most njirimara dị mkpa nke ngwaahịa mgbake Okwu. Dabere na ule zuru oke anyị, DataNumen Word Repair nwere ọnụọgụ mgbake kachasị mma, dị mma karịa ndị asọmpi ndị ọzọ n'ahịa!
Mụtakwuo banyere otu DataNumen Word Repair na-ese anwụrụ mpi
Injinia physic https://helpwithphysics.com
Oh mma m, I meela! Enweghị m ike ikwere na ị nwere ike idozi ya! M na-agbalị n'ụzọ nkịtị ihe ọ bụla ọzọ- nke a bụ ịtụnanya, na m bụ ya
Afọ juru m afọ. Ana m akwado gị onye ọ bụla. Achọrọ m gị
Jenụwarị 29th, 2019
Ngwọta maka ịgbaso njehie ndị a na-ahụkarị n'ihi nrụrụ akwụkwọ ederede
Njikwa xxxx.docx enweghị ike imeghe n'ihi enwere nsogbu na ọdịnaya ya
Faịlụ Conversion Dialog gbapụta mgbe imeghe a rụrụ arụ Okwu Akwụkwọ
Foto ndị dị na - enweghị ike igosipụta n’akwụkwọ ndị rụrụ arụ
Main Akụkụ na DataNumen Word Repair v4.2
Nkwado iji rụkwaa Microsoft Word 6.0, 95, 97, 2000, XP, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 na Word for Office 365 akwụkwọ.
Akwụkwọ nkwado nke Okwu maka Windows na Mac nyere.
Nkwado iji weghachite ederede, onyonyo na nhazi na akwụkwọ Okwu.
Nkwado iji weghachite tebụl.
Nkwado iji weghachite listi ma ọ bụ aha edepụtara.
Nkwado iji weghachite nhazi na hyperlinks.
Nkwado iji weghachite ibe edokọbara.
Nkwado iji weghachite ederede Okwu site na ogerary faịlụ mgbe ọdachi data mere.
Nkwado iji dozie Okwu doc ​​na docx faịlụ na mgbasa ozi rụrụ arụ, dịka diski diski, Zip diski, CDROM, wdg.
Nkwado ịrụzi ogbe Okwu doc ​​na docx faịlụ.
Nkwado ịchọta ma họrọ akwụkwọ Okwu ga-edozi na kọmpụta mpaghara.
Nkwado mwekota na Windows Explorer, n'ihi ya, ị nwere ike ịrụzi doc na docx faịlụ na onodu (nri pịa) menu nke Windows Explorer mfe.
Nkwado ahịrị nkwado (DOS ozugbo) afọ maka idozi faịlị Okwu.
iji DataNumen Word Repair iji nwetaghachi ihe ederede ederede
Mgbe ederede Okwu gị (* .DOC na * .DOCX faịlụ) merụrụ ma ọ bụ mebie emebi ma ị nweghị ike imeghe ha ọfụma, ịnwere ike iji DataNumen Word Repair ka i scanomi Okwu faịlụ na-agbake dị ukwuu data dị ka o kwere.
Rịba ama: Tupu ịghachite faịlụ ọ bụla rụrụ arụ ma ọ bụ mebiri emebi DataNumen Word Repair, biko mechie Microsoft Okwu na ngwa ọ bụla nwere ike ịnweta faịlụ Okwu ahụ.
Họrọ emerụ ma ọ bụ mebiri emebi Okwu .doc / .docx faịlụ ka emezi:
Nwere ike itinye aha faịlụ .doc / .docx aha ozugbo ma ọ bụ pịa bọtịnụ na-agagharị na họrọ faịlụ. I nwekwara ike pịa bọtịnụ ịchọta faịlụ a ga-arụzi na kọmputa mpaghara.
Site na ndabara, DataNumen Word Repair ga - echekwa faịlụ Okwu edozi dị ka xxxx_fixed.doc, ebe xxxx bụ aha isi mmalite Okwu .doc / .docx. Ọmụmaatụ, maka isi okwu Okwu faịlụ Damaged.docx, aha ndabara maka faịlụ ahụ edoziri ga-emebi emebi_fixed.doc. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ iji aha ọzọ, biko pịa ma ọ bụ tọọ ya dịka:
pịa bọtịnụ. DataNumen Word Repair ga start na-enyocha ma na-emezi faịlụ isi okwu Okwu ahụ.
Mgbe usoro mmezi ahụ, ọ bụrụ na enwere ike idozi faịlụ isi iyi Okwu nke ọma, ị ga-ahụ igbe ozi dị ka nke a:
DataNumen Word Repair 3.7 weputara na Disemba 12th, 2020
DataNumen Word Repair A tọhapụrụ 3.5 na November 2nd, 2020
DataNumen Word Repair A na-ahapụ 3.4 na November 4th, 2019
DataNumen Word Repair A tọhapụrụ 3.3 na May 23th, 2019
DataNumen Word Repair 3.2 weputara na March 14th, 2019
DataNumen Word Repair A na-ahapụ 3.1 na Jenụwarị 21th, 2019
Okwu Nkwado 2019.
Melite engine ghari.
DataNumen Word Repair 3.0 weputara na October 25th, 2018
Melite mgbake nke paragraf indents.
DataNumen Word Repair A na-ahapụ 2.9 na August 25th, 2018
Melite mgbake nke ederede.
DataNumen Word Repair A na-ahapụ 2.8 na July 16th, 2018
Nkwado Okwu maka Office 365 akwụkwọ.
DataNumen Word Repair A na-ahapụ 2.7 na Jenụwarị 18th, 2018
Nkwado iji weghachite data.
DataNumen Word Repair A na-ahapụ 2.6 na November 9th, 2017
Kwado Windows 10.
Nkwado Office 2016.
DataNumen Word Repair A tọhapụrụ 2.5 na July 3rd, 2015
DataNumen Word Repair 2.1 wepụtara na July 20, 2013
Nkwado fanye foto na akwụkwọ natara.
Kwado odide Asia.
DataNumen Word Repair A tọhapụrụ 2.0 na June 8, 2013
Nkwado Okwu 2007, 2010 na 2013.
DataNumen Word Repair A tọhapụrụ 1.1 na June 4, 2005
Nkwado iji rụkwaa akwụkwọ Microsoft Word 2003.